नेपाल प्रहरीका ९ जना महिला कमान्डरहरु जनपदतर्फका शान्ति सुरक्षामा | AbcSanchar.com
नेपाल प्रहरीका ९ जना महिला कमान्डरहरु जनपदतर्फका शान्ति सुरक्षामा
प्रकशित मिति : २९ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १५:२४
नेपाल प्रहरीका ९ जना महिला कमान्डरहरु जनपदतर्फका शान्ति सुरक्षामा प्रत्यक्ष खटिएका हुन्छन् भने प्राविधिकतर्फका आ–आफ्नो विशेषज्ञताको जिम्मेवारीमा हुन्छन् । उनीहरुको दरबन्दी, भर्ना र बढुवासमेत भिन्न–भिन्न हुन्छ ।
पार्वती थापा र विमला थापा नेपाल प्रहरीको ६४ वर्षे इतिहासमा नायव महानिरीक्षक (डीआईजीपी) मा पुगेका पहिलो महिला हुन् । उनीहरुले केही वर्षअघि अवकाश पाएपछि प्रहरीमा कुनै पनि महिला डीआईजी बनेका छैनन् ।
प्राविधिकतर्फ भने अहिले नेपाल प्रहरीको उच्च पद अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) मा डा. आशा सिंह छिन् । नेपाल प्रहरीको सबैभन्दा उच्च पदमा रहेकी सिंह नेपाल प्रहरीको अस्पताल प्रमुखसमेत हुन् । सिंह त्यस्तो सौभाग्यशाली बनिन्की जो सो पदमा रहेकी महिलाकै उत्तराधिकारी बनेर आइन् । यसअघि सो पदमा डा. दुर्गा थापा पुन थिइन् ।
प्रहरीमा माथिल्लो पदमा पुग्ने पहिलो महिलाको इतिहास बनाएकी पुनले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश लिएपछि वरिष्ठतामा आफूभन्दा अगाडि रहेका डीआईजीपीलाई उछिनेर सिंह एआईजीपी बनिन् ।
पार्वती थापा, विमला थापा, डा. आशा सिंह र डा. दुर्गा थापा पुन नेपाल प्रहरीमा उदाहरणीय पात्र हुन् । ६४ वर्षको इतिहासमा नेपाल प्रहरीमा महिलाको संख्या अपेक्षाकृत रुपमा बढिरहेको छ । नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि लागू भएको समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाले प्रहरीमा महिला सहभागिता बढ्दो छ ।
गत असोजमा साढे तीन हजार दरबन्दी थपिएपछि करिब ८० हजारको दरबन्दी रहेको नेपाल प्रहरीमा करिब ६ हजार महिला छन् । यो जनपद र प्राविधिक दुवैतर्फ गरेर हो ।
प्रहरीमा हाल ७९ हजार ५२३ जनाको दरबन्दी छ । प्रहरीमा जनपद र प्राविधिक गरी जवानदेखि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)सम्मको पदमा आईजीपी र डिआइजीपी बाहेकको पदमा महिला पुगेका छन् ।
प्रहरी अस्पतालको कमाण्डरमा एआईजीपी डा. आशा सिंह
सिंह नेपाल प्रहरीको एआईजीपी पदमा पुगेर प्रहरी अस्पतालको प्रमुख हुने दोस्रो महिला हुन् । उनी प्रहरीको माथिल्लो तहमा पुग्ने पहिला मधेसी महिलासमेत हुन् ।
सिंह २०७५ पुस १ गते प्राविधिक डीआईजीपीमा बढुवा भएकी थिइन् । उनी आफूसँगै डीआईजीपीमा बढुवा भएका डा. मिनराज पाठक र डा. सुमनराज श्रेष्ठलाई पछि पार्दै एआईजीपी बनिन् ।
प्रहरी अस्पताल प्रमुख एआईजीपी दुर्गा थापा पुनले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण गत पुस ३ गते अवकाश पाएपछि माघ ८ गते सिंह सो पदमा पुगेकी थिइन् ।
पहिलो इन्स्पेक्टर पूजा सिंह संघीय प्रहरी इकाई पोखरामा
नेपाल प्रहरीमा २०४९ मा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट इन्सपेक्टरमा एकजना महिलाको नाम निस्कियो– पूजा सिंहको । जनपदतर्फ इन्सपेक्टरमा नाम निकाल्ने उनी पहिलो महिला हुन् । उनी अहिले संघीय प्रहरी इकाई पोखराको प्रमुख छिन् ।
२०७९ सम्म प्रहरी सेवामा रहने उनी डीआईजीपीमा बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धामा छिन् । उनी २०७५ वैशाखमा एसएसपीमा बढुवा भएकी थिइन् ।
मेट्रोमा एसएसपी किरण बज्राचार्य
२०५१ सालमा नेपाल प्रहरीको निरीक्षक (इन्सेपेक्टर) पदमा पहिलो पटक चारजना महिलाको प्रवेश भयो । तीमध्येकी हुन् प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) किरण बज्राचार्य । उनी २०७५ वैशाखमा एसएसपीमा बढुवा भएकी हुन् ।
बज्राचार्य महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय, रानीपोखरीमा कार्यरत छिन् । केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआईबी)मा कार्यरत छँदा मानव बेचबिखनविरुद्ध उत्कृष्ट काम गरेकी बज्राचार्य सन् २०१६ मा ‘टिआईपी रिपोर्ट हिरो’ छानिएर वर्ष हिरो व्यक्ति घोषित भएकी थिइन् ।
उनले प्रदेश नं. २ को ट्राफिक प्रहरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरको प्रमुखको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरेकी छिन् ।
यूएन मिसनमा एसएसपी मिरा
नेपाली प्रहरीको एसएसपी मिरा चौधरी संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति मिसनमा छिन् । उनी २०५१ सालमा इन्सपेक्टरबाट प्रहरीमा प्रवेश गरेकी हुन् । किरण बज्राचार्जसँगै इन्सपेक्टरबाट प्रहरीमा प्रवेश गरेकी उनी २०७५ वैशाखमा एसएसपीमा बढुवा भएकी हुन् ।
चौधरीले डीएसपी हुँदा बालाजु वृत्त, पाल्पा र एसपी हुँदा मकवानपुरको प्रहरी प्रमुख भएर काम गरेकी छिन् ।
कुकुरविज्ञ एसएसपी देउती गुरुङ
नेपाल प्रहरीमा चारजना एसएसपीमध्येकी एक देउती गुरुङ कुकुरविज्ञ छिन् । उनी प्राविधिकतर्फकी एसएसपी हुन् ।
११ एसपीमा ५ जनपद, ६ प्राविधिक
नेपाल प्रहरीको प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) पदमा ११ जना महिला छन् । तीमध्ये ५ जना मात्रै जनपदमा छन् । बाँकी ६ महिला प्राविधिकतर्फ छन् ।
प्रतिस्पर्धामा पछि एसपी किरण र दुर्गा
२०५१ सालमा इन्सपेक्टरबाट नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गर्ने चार महिलामध्येकी हुन् एसपी किरण राणा र दर्गा सिंह । उनीहरुसँगै इन्सपेक्टरमा भर्ना भएका किरण बज्राचार्य र मिरा चौधरी गत २०७५ वैशाखमै एससएसपीमा बढुवा हुँदा राणा र सिंह भने अझै एसपीमै छन् ।
राणाले भक्तपुर र सिंहले दाङको प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् । राणा प्रहरी प्रधान कार्यालयको महिला शाखा र सिंह महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुरमा कार्यरत छन् । उनीहरु दुवैजना अबको बढुवामा एसएसपी हुनेछन् ।
जिल्ला हाँक्दै पन्त र सिग्देल
जनपदतर्फ अन्य तीन एसपीमध्ये गंगा पन्त जिल्ला प्रहरी प्रमुखको नेतृत्व गर्दैछन् । उनको मंसिरमा नै चितवन प्रमुखमा सरुवा भएको थियो । तर विवादका कारण उनी चितवन जान सकेनन् । पछि उनलाई पर्सा जिल्ला प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै, एसपी रञ्जु सिग्देल जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । एसपी तारा थापा प्रहरी तालिम केन्द्रमा कार्यरत छिन् । पन्त र थापा २०५६ मा इन्सपेक्टरबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् भने सिग्देल २०५८ मा प्रवेश गरेकी हुन् ।
२२ डीएसपीमा ५ जनपद र १७ प्राविधिक
नेपाल प्रहरीमा नायव उपरीक्षक (डीएसपी)मा २२ जना महिला छन् । तीमध्ये जनपदतर्फ ५ जना मात्रै छन् । बाँकी १७ जना प्राविधिकतर्फ छन् ।जनपदतर्फबाट ५ डीएसपीमा बसुन्धरा खड्का २०६१, दिप्ती कार्की र अञ्जना श्रेष्ठ २०६३ तथा छिरिङ किया र चिनिमाया तामाङ २०६४ मा इन्स्पेक्टर